Dubai mune rimwe remaguta anokosha mazuva ano - Kushanyira murenje
Dubai mune rimwe remaguta anokosha mazuva ano
Dubai & Kuchengetedzwa Kwemigwagwa?
Dai 9, 2019
14 Best Small Scale Business Ideas mazano ekugadzirisa Bhizimisi Rako ku Dubai
Dai 11, 2019
Dubai mune rimwe remaguta anokosha mazuva ano!
Dubai - rimwe remaguta akakosha mazuva ano. Iko kusanganisa pakati yemazuva ano, remangwana uye inonakidza nharaunda uye vanhu vakasiyana-siyana. Zvinoshamisa kuona tsika dzakawanda dzakasiyana munzvimbo imwechete uye kusvika pakuziva tsika yechiArabhu panguva imwe. Kune nzvimbo dzakawanda kwazvo muguta yekuongorora uye yekunakidzwa.
Chinhu chekutanga chaunoona kana iwe uchisvika muDubai iyo Dubai airport yendege. Imwe yenhandare dzakakura uye dzinotyisa munyika. Imwe chipikiri yandinogona kukupa ndeyekuodha bhuku Marhaba basa risati rasvika. Iri ibasa rinobatsira uye rakakosha paiyi nendege yakabatikana. Ichakuchengetedza iwe nguva uye kudzivirira kuvhiringidzika iwe kwaungave nako kana uchisvika.
Mubatsiri wendege tichakumirira iwe pagedhi kana wasvika uye utarisire zviitiko zvese zve airport. Iwe unongoda kupa pasipoti yako kumumiririri uye iye achakuchengeta iyo yasara, iwe uchinge uine nguva yekutarisa uye "kuona" airport.
Sezvo madaro aripo akakura, iwe uchapihwa neiyo buggy mota, inozokuendesa kubva kugedhi pane vanosvika kune inozivikanwa ELEVATOR, iyo inoenda newe kune tsika uye chikwereti chinzvimbo nzvimbo. Iyi yakakwira yakadaro zvinoshamisa zvinosiya WOW kunzwa, uchifamba mairi nekuti yakakura zvekuti inogona kutora vanhu ve60 uye zvakare paine tsvarakadenga yemvura shure kwayo yekutarisa uchifamba mairi.
Kazhinji, mutsara mutsika ndewerefu, nekuti unotanga kuda kuongorora ziso uye wozotevera mushure mekutarisa kwepasipoti. Nemasevhisi aMarhaba, iwe unogona kutiza kubva mumukutu, nekuti une chekutanga pane yakasarudzika yakasarudzika uye inopfuura nekukurumidza kupfuura vamwe. Zvakare panzvimbo yemubhadharo wechikwereti, kuchave nemumiririri ne trolley, iyo inotarisira yako nhumbi, kuendesa iwe kwauri kubuda, uye kunyange kuiisa mumotokari iwe, pasina iwe kana kumbonetseka. Iyi sevhisi inosanganisira visa kuburitsa kana wasvika pamwe chete uye yakakosha pokuvata paunogona kuzorora usati waenda munzira yekudzoka. Saka icho chipoko chakanaka kuva nepfungwa kana uchishanyira Dubai kunyanya kana iri yekutanga.
Nhasi tichawana guta rino uye ticharatidza nzvimbo yaro
Imwe yenzvimbo dzinonakidza ndeye Dubai Marina. Nzvimbo izere nemarestaurant akanaka uye nemazariro ane runako rwekutaridzika kwehotera yakanaka Burj Al Arab. Iwe unokwanisa kunzwa iyo yeArmic exotic nharaunda ichiedza chaiwo Arabic hupfu paunenge uine shisha -mudziyo wekuputa fodya ine zvinwiwa zvakasiyana.
Chekutanga chinonakidza chiitiko haufanirwe kupotsa ari kushanyira Desert. Kana usati waenda kurenje saka hauna kuenda kuDubai.
Iyo rwendo rwegwenga inosanganisira zviitiko zvakaita se: Dune Bhashing neine buggy mota mumajecha. Ngamera dzinofamba, dzichidya kudya kwemanheru, dzakagara pamakapeti akakosha pazasi pejecha uchiona seyakajairika dumbu reArabhu dumbu-rinotaridza zvinoshamisa paunongoona muDubai chete. Imwe yemitambo yekutamba ine njodzi uye yakanaka mukadzi anotamba aine pfumo mumaoko, pasi pechiridzwa chemimhanzi yemimhanzi. Iye ari kutamba nekutamba nacho zvakanakanaka sedhiziri, asi panguva imwecheteyo achichengeta mucherechedzi achinyanya kusimuka uye achivasiya vachinzwa kunge mune muchina wenguva. yakachinjirwa kune ayo mashiripiti echiArabytytales.
Ari kutamba nekutamba nayo zvakanakisa sedhanzi, asi panguva imwechete kuita kuti mucherechedzi arambe achiseka uye kuvasiya vachinzwa senge ari muchina nguva yakadzoserwa mune izvo zvemashiripiti echiArabial tales.
Chimwe chiitiko ndiHenna Paintings- yakajeka mifananidzo inowanzoitwa pamaoko uye pachiuno. Inotaridzika senge tattoo asi ine ruvara rwe brownish, iyo inogara kweinenge vhiki kana maviri, zvinoenderana nekuti unoibata sei uye kangani unoratidzwa nemvura. Kazhinji vakadzi vemuno vanopfeka kunge chishongo yakawedzerwa kune yavo nguo dzenyika.
Kune akawanda mashopu nemarestaurant mugwenga, kwaunogona kutenga zvigaro zvechipfeko uye zvipfeko zvinopfekwa nevatambi- zvimedu zvipfeko zvipfeko zvakasiyana mune zvakasarudzika zvakasarudzika nemapepa madiki endarama paari, izvo zvinogadzira ruzha irwo uchitamba Izvo zvinogona kugara seyeuchidzo muhodhi yako. Rwendo rwegwenga chinhu chisingakanganwiki iyo inofanirwa kuita-kana uchishanyira Dubai Unogona nyore nyore kushanya iyi neimwe yemakambani emuno Desert safari Dubai http://www.desertsafaridubai.com/ uko iwe unogona kuwana zvakanakisisa zvekutengesa kwekutengesa uye kusiyana kwakasiyana kwepakiti.
Imba yakareba kupfuura dzose munyika Burj Khalifa
Inotevera nzvimbo yekumanikidzirwa kuona ndeye, hongu, iyo yakareba kwazvo kuvaka nyika Burj Khalifa. Tsime riri padivi payo rakanaka kutamba mvura pasi penzwi remitambo mimhanzi dzakasiyana uye nemwenje. Kune akawanda maresitorendi, zvitoro nemabhawa munzvimbo ino maunogona kuongorora.
Zvitoro, kune vazhinji, asi inonyanya kuzivikanwa ndeye Dubai Mall uye Mall yeEmirates. MuMall yeEmirates, unogona kuona iri ski nzvimbo kubva kubva kunopisa kunze uko iwe unogona kuwana kusimuka mune mall.
Dubai mall ine aquarium yakakura pane iwe unogona kuona maharaki nezvimwe zvisikwa zvegungwa zvakasiyana.
Kutenga kunogona kuita zvishoma kunonakidza futi. Kunze kwezvitoro zvese uye nemamall mahombe, kune dzimwe nzvimbo dzakavanzika uko iwe unogona kuita kutenga mune imwe zvishoma zvishoma nzira uye untypical nzira. Zvakanaka, isu tose tinoziva zvinoitika mune yechipiri bhaisikopo Bonde uye neguta, iko vasikana vari kuenda kuzvitoro zvakavanzika kunotenga mabhegi emanyepi ekunyepa. Ndizvozvo - Ndiri kutaura pamusoro pezvitoro zvakavanzika. Idzi inzvimbo dzausinganyatsoona nekuti dzakavakirwa muzvivakwa zvekugara.
Kana ukasangana nemutengesi mumugwagwa ari kukukoka kuti utarise muchitoro chakavanzika, usatya uende kunoona uye neruzivo iyi inonakidza nzira yekutenga. Uye yeuka kutaurirana!. Vatengesi vanofarira kubhodha, saka iwe unofanirwa kuve nehunyanzvi hwakanaka hwekutamisa nehumwe unogona kupedzisira washandisa mari inosekwa pane zvekunyepa.
Tese tinoziva kunaka kwazvo, kuvandudza uye kupenya ndeye Dubai. Asi kunyangwe zera renyika, nyika ino ine nhoroondo zvakare. Iwe unogona kutora zvishoma zvishoma uye kuongorora iyo Old guta reDubai. Kuti uendeko unofanirwa kutora chikepe uye kuyambuka rwizi rwe 1 chete kana 2 dirhams. Ichi chiitiko chinoshamisa nekuti mabhoti aya mashoma uye apfupi zvekuti kunzwa kwekufamba mairi zvinoita kunge wave kuda kuwira mumvura chero nguva.
Bhoti dzinogona kutora kusvika ku4 kana 5people uye kazhinji pane munhu mumwe anofambisa chikepe. Paunosvika kune rumwe rutivi iwe unopinda nyika inonyengera yemashiripiti - souk yakare yeDubai. Migwagwa midiki izere nemabhawa. Kusiyana kukuru uye kuwanda kwezvinonhuwira zvaunogona kuona muhupenyu hwako. Masaga mahombe akazara nezvinonhuwira zvine mavara, mamwe acho asina kujairika uye akajairika. Uye kunhuhwirira uye kunhuhwirira mumhepo iwe waunogona kunzwa kubva kwavari kunotapira uye hakuenzanisiki iyo ichave inobatwa mupfungwa dzako nekusingaperi. Ino ndiyo imwe nzvimbo iyo inoenda kuna "Ali Baba uye 40 mbavha" Fairytale.
Apa ndipo panoguma rwendo rwedu, asi guta iri rakahwanda dzimwe nzvimbo dzakawanda izvo zvinonyanya kushamisa uye zviitiko zvekuongorora. Dubai ndeimwe inonakidza uye maguta akajeka munyika, aunofanira kushanyira.
Dubai City Kambani ikozvino ichipa nhungamiro dzakanaka dzeHupenyu muDubai. Dare redu rakasarudza kuwedzera ruzivo rwemutauro mumwe nomumwe wedu Jobs in Dubai Guides. Saka, mune izvi mupfungwa, iwe zvino unogona kuwana mazano, mazano uye basa muUnited Emirates nemutauro wako.